Taariikhda My Butros » 7 Waxyaabaha aad ka ogaato ka hor Dating Foodie ah
by Jennifer Finney
7 Waxyaabaha aad ka ogaato ka hor Dating Foodie ah
Last updated: Nov. 23 2020 | 2 min akhri
Inkasta oo aniga qudhaydu aan ahay taageere weyn oo cunto ah, ugu of saaxiibaday iyo taariikhaha ayaa foodies is-naadiyey. Ereygan waxa kaliya ma ahan macnaheedu ma qaadan sawirada cuntada iyo dhajinta in ay warbaahinta bulshada. Foodies caadaystay cuntada, oo waa iyada oo xidhiidhka aan la foodies halkaas oo aan ka bartay kaliya sida wayn ee ay tegi doonaa cunto.
Cuntada waa wax walba
Waxay qabatinka si aannu cunto u tagaa wax ka baxsan in aad image awood. Cuntada waa mudnaanta koowaad iyo kan danbe ee maalintii. Markaasuu, ma jiraan wax line barbaro in la helo “kaamil ah” item cuntada. Diyaar u safraan masaafo weyn kuwa xaqa ah strawberries xaq u.
Foodies waa khubaro marka ay timaado pairings cuntada. Haddii ay soo jeedinaynaa in cunista kalluunka bariis ama wada isku daro laba suugada, la socdaan. Fursadda in ay soo jeedin indhahaaga u furay doonaa si saxan ka badan flavorful.
Foodies sidoo kale u muuqdaan in ay caraf dhadhan by si tartiib ah dhadhankiisu cuntadooda. Iyada oo ay tani u muuqan kartaa doqon, waxaa dhab kaa caawin doona inaad si loo qadariyo cunto dheeraad ah taas oo iyana ka faa'iidaysan kartaa xidhiidhka.
Haddii ay Yelp ama Google, isla markiiba ka dib isku dayaya makhaayad cusub ama saxan, aad foodie noqon doonaa dhigin mid ku faraxsan oo ku saabsan qoraal u eegis lagu sameeyo, waayo, sida foodie a, ay dareemaan masuuliyada ah in la wargeliyo foodies kale ee ay daahfurka cusub laga helay.
Qorshee waqtigaaga adoo agagaarka cunidda
Taariikhaha iyo safarka iilan doonaa agagaarka cunto. Fursadda yihiin, waxay samaysteen liiska baaldi waa-isku day suxuunta iyo maqaayado. iyaga raaxeysan, eegaan liiska iyo soo qaado baxay dhowr ka mid ah kuwa makhaayadaha in aad rabto in ay isku dayaan.
Foodies noqday saaxiibo la server ee maqaayadaha ay jecel yihiin. Ma aha oo kaliya labada ay u hesho in ay xidhmaan badan cunto laakiin helitaanka in la ogaado server ah waxay keeni kartaa in dhimis iyo / ama suxuunta qarsoon. Sidoo kale, isagoo server a jecel macnaheedu kaliya socday restaurant in marka server la shaqeeya.
Ma aha oo kaliya ma aad foodie jeclaan inuu wax la cuno, laakiin waxay u badan tahay waxay noqon doontaa mid aad u anfacaya jikada. Inta aad u hesho in ay isku dayaan cuntada delicious, foodies noqon doonaa “badiyay” jikada saacado. Marka ay hesho in niyadda karinta, Waxaan soo jeedinaynaa in ay iyaga ku biiraan jikada si uu waqti la qaato.
Had iyo jeer la ogaado meesha uu dukaanka raashinka ah
Ma ogid marka laga yaabaa in aad u baahan tahay wax. Foodies ogayn oo kaliya halkaas oo dukaanka raashinka dhow yahay, laakiin sidoo kale waxay ogaan doonaan saacadaha. Diyaar u dhigi daqiiqadii ugu danbeysay orod dukaanka raashinka.
Shukaansi foodie ah had iyo jeer waa tuurnimo. By isku duubay ay qabatinka waalan-sida, aad xaqiiqdii ma gaajoon doono, waayo, jacaylka mar kale.
Sidee Si Noqo Dating Safe
7 Khaladaadka Fool Haweenka Samee Fursadda kasta oo xiriir burbur Taasi
Socdaalka baabuur la xayawaankaaga
G-Spot Facts iyo Khuraafaadka
Top 5 US magaalooyin Raga kelidood